In ka badan 130 arday oo ka qalin jabisay dugsiga Ibnu-Baz ee magaalada Bosaso-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / In ka badan 130 arday oo ka qalin jabisay dugsiga Ibnu-Baz ee magaalada Bosaso-Sawiro
In ka badan 130 arday oo ka qalin jabisay dugsiga Ibnu-Baz ee magaalada Bosaso-Sawiro
April 18, 2018 - By: Abdirahman Abdi
Dugsiga hoose/dhexe ee Ibnu-Baz ee magaalada Bosaso ayaa waxaa ka qalin jabiyey arday farabadan, kuwaasi oo isugu jiray arday xifdisay ba Quraanka Kariim ah iyo arday ka gudbaysay fasalka 8-aad.
Sagaashan(90) ka mid ah ardaydaasi waxa ay barteen Quraanka kariimka, halka 58 kale ay ka baxeen fasalka 8-aadka.
Xaflad ballaaran oo si weyn loo agaasimay isla markaana shahaadooyin iyo abaal marino lagu gudoon siinayey macallimiinta iyo ardayda ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee hotel Sabaax ee magaalada Bosaso.
Waxaa ka soo qeyb galay munaasabadda maamulka dugsiga, arday, waalidiin, culimo’udiin, mas’uuliyiin ka socotay Dallada waxbarashada ahliga ah ee PEN, madaxda jaamacadaha Bosaso, nabadoono, maamulka mu’asasada Al-Minhaaj iyo marti sharaf kale.
…Waxaa dugsiga la furay sanadku marka uu ahaa 2004, waxa uu soo maray maraxalado kale duwan ilaah mahadii xiligan waxa uu leeyahay faracyo kale duwan ayuu yiri maamulaha guud ee dugsiga Ibnu Baz Feysal Xuseen Cali .
Ibraahim Aadan Jaamac oo ah madaxa dallada PEN ayaa sheegay qiimayn ay ku sameeyeen dugsiyada in dugsiga Ibnu Baz kaalinta koowad uu galay dusiyadaasi
..Kormeer aan ku sameynay dugsiyada magaalada Bosaso, aan ka qiimeynay dhinaca waxbarashada, maamulka, nidaamka iyo xufnaanta shaqo waxa uu noqday iskuulka koowaad ayuu yiri Ibraahim Aadan Jaamac.
Ciise Saciid oo ka socda Al MinHaaj ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda ka qalin jabisay dugsiga.
Yuusuf Suudi oo ku hadlayey afka waalidiinta ayaa sheegay in dugsiga Ibnu baz uu ka mid yahay dugsiyada ugu wanaagsan Puntland, sanad walbana uu soo saaro arday fara badan oo baratay Quraanka kariimk ah
Prof. Cabdiweli Cabdiraxmaan Gayre oo ah gudoomiyaha jaamacadda Bosaso ayaa ardayda iyo macalliiminta ugu hambalyeey xafladda, isal markaana sheegay waxbarashado in ay muhiim tahay iyada hormar lagu gaaro.
Geba-gebadii muanasabadda ayaa waxa lagu guddoon siiyey abaal marino kale duwan macallimiinta iyo maamulka dugsiga Ibnu Baz halka ay macalimiintuna ay ardayd gudoon siiyeen shahaadooyin.